Galaxy A82 5G wuxuu la imaan doonaa Qualcomm's Snapdragon 855 | Androidsis
Galaxy A82 5G waa mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ku soo xiga Samsung. Inbadan ayaa lagu xamanayay qalabkan, mabda 'ahaan, waxaa la sheegay inuu noqon doono mid dhex dhexaad ah, laakiin waxay umuuqataa inuu noqon doono mid kamid ah kuwa kaladuwan, laakiin kan hada aan aheyn.
Sida laga soo xigtay Geekbench, jaangooyada dhowaan tijaabisay iyo tan soo saartay liistada taleefanka, Galaxy A82 5G waxaa lagu soo bandhigi doonaa suuqa iyadoo la adeegsanayo quraafaadka iyo sida loo yaqaan Qualcomm Snapdragon 855Waa wax aad u xiiso badan, maadaama aysan caadi u ahayn soo saarayaasha moobiilku inay adeegsadaan Chipsets-kii hore ee moodelladooda cusub, in kasta oo ay taasi caqli gal ka dambayn karto.
Galaxy A82 5G wuxuu la imaan doonaa Snapdragon 855 hoosta daboolka
Waxaa la sheegay in Snapdragon 855 chipsets badan oo processor ah ay ka tageen iyagoo aan isticmaalin Samsung sidaas darteedna ay keyd u yihiin. Shirkadda, si qayb ahaan ama gebi ahaanba looga takhaluso kuwan, waxay ku hirgelin doontaa iyaga taleefanka cusub ee hore loo soo sheegay.
Iyada oo ku saleysan waxa Geekbench shaaca ka qaaday qalabkan dhowaan, Waxay noqon doontaa mid leh 6 GB awoodda xasuusta RAM oo la yimaada nidaamka hawlgalka Android 11.
Waxyaabaha kale ee ay tilmaamtu ku muujisay liistada ayaa ahaa dhibcaha ay moobaylku heleen calaamadaha, kuwaas oo ah 757 qaybta hal-abuurka ah iyo 2.678 dhibcood oo ku jira qaybta qaybo badan.
Marka laga hadlayo qeexitaanka Galaxy A82 5G, wax badan lama oga, laakiin waxaa la sheegay in lagu bilaabi doono shaashad tiknoolajiyad ah oo Super 6.7 2.400 inch ah oo leh tiknoolajiyad buuxda oo leh FullHD + oo ah 1.080 x 128 pixels, oo ah meel gudaha ah oo lagu kaydiyo 4.500 GB . awood iyo batari 64 mAh ah. Waxa kale oo jiri lahaa baakad kamarad afar geesle ah oo leh XNUMX MP shidma weyn.
Ugu dambeyntiina, lama oga goorta mobilka la furayo, laakiin xaqiiqda ah in macluumaadkani soo muuqday, ayaa taas na fahansiinaysa bilaabitaanku wuxuu ku dhow yahay geeska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » 855 Snapdragon 2019 si loogu soo nooleeyo Galaxy A82 5G: taleefanka ayaa ka muuqda Geekbench
Telefoonadii ugu fiicnaa ee soo mara Maarso 2021